भ्यालेन्टाइन दिवस - प्रेम दिवस - जापान च्यानल गाइड
सोमबार, मार्च १, २०२१
भ्यालेन्टाइन दिवस - प्रेम दिवस
घटना मिति: विभाग: एजेन्डा, उत्सव
ब्राजिल विपरीत, जहाँ मिति १२ जुन जापानमा मनाईन्छ प्रणय दिवस यो दिन मनाइन्छ फेब्रुअरी १th। मिति भनिन्छ ー レ ン タ イ ン デ ー (भ्यालेन्टाइन डे) जब महिलाले पुरुषहरूलाई उपहार दिन्छन्, उनीहरूको प्रेम र स्नेह व्यक्त गर्छन्। यो परम्परा अमेरिकाबाट सन् १ 1936 .XNUMX मा जापानमा ल्याइएको थियो, चकलेट कम्पनीहरूले जुन उत्सवको परिचय दिन चाहन्थे भ्यालेन्टाइन.
सुरुमा, मितिले प्रेमीहरूलाई आफ्नो प्रियजनहरू प्रस्तुत गरेर उनीहरूको भावना व्यक्त गर्न थाल्यो, तर समय बित्दै जाँदा यो सहमति भयो कि महिलाहरू मात्र चकलेटको साथमा उपस्थित हुन्छन्।
त्यस समयमा, चकलेट उद्योग बजार वार्षिक बिक्री को लगभग आधा पुगेको छ। यसको कारण यो हो कि यो दिन केवल प्रेमीहरु बीच मात्र मनाईदैन, तर मित्रहरु, परिवार र सहकर्मीहरु लाई पनि, अरु देशहरुबाट बिभिन्न विशेषताहरु प्राप्त गर्न।
जबकि अन्य देशहरूले यो उत्सव मनाइरहेका छन् Valentines दिन वर्षमा एक पटक मात्र जापानमा यो दुई पटक मनाइन्छ। फेब्रुअरी १ ​​On मा, यो केवल महिलाहरू हो जसले पुरुषलाई चकलेट सहित प्रस्तुत गर्दछन् र मार्च १ 14 मा, पुरुषहरू पालो पालो चकलेट फिर्ता गर्नका लागि सेतो दिन, उत्सव जापानमा चकलेट निर्माताले मात्र आविष्कार गरे।
चकलेट वितरणको यो संस्कृति यति बलियो भएको छ कि त्यहाँ फरक व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न प्रकारका चकलेटहरू छन्।
तिनीहरूलाई types प्रकारमा वर्गीकृत गरिएको छ:
義理 チ ョ コ (गिरी चोको):यो चकलेट हो जुन हामी मानिसहरूलाई दिन्छौं जसको सामाजिक दायित्व, पुरुष मालिकहरू, ग्राहकहरू र सहकर्मीहरू छन्। शब्द "गिरी" को अर्थ "दायित्व" हो, यसैले यी प्रकारका चकलेटहरूको कुनै रोमान्टिक सम्बन्ध हुँदैन।
本命 チ ョ コ (होन्मेई चोको)यो साँचो प्रेमको लागि चकलेट हो। महिलाहरूले यो चकलेट उनीहरूलाई माया गर्ने मानिसमा पुर्‍याउँछन्। यदि तिनीहरू डेटि're गर्दै छैनन्, उपहारले कथनको रूपमा काम गर्दछ।
友 チ ョ コ (टोमो चको):यो नजिकको साथीहरूलाई दिइएको चकलेट हो, स्नेह र मित्रता देखाउने एक तरिकाको रूपमा।
Family ァ ミ リ ー チ ョ コ (परिवार चोको): ती हामीले परिवारका सदस्यहरूलाई दिनका लागि किनेका छौं कि पतिहरू, आमा बुबा, हजुरबा हजुरआमा, बच्चाहरू, काका, काका, भाइहरू, कि, कुनै पनि पुरुष व्यक्तिसँग हामीसँग पारिवारिक सम्बन्ध छ।
逆 チ ョ コ (Gyaku choco):यद्यपि भर्खरको कस्टम, Gyaku choco मतलब भ्यालेन्टाइन डे मा पुरुष र महिला बीच चकलेट एक्सचेंज हुन्छ।
भ्यालेन्टाइन डे कहानी:
भ्यालेन्टाइन डे, केहि देशहरूमा बोलाइयो प्रेम दिवस यो एक विशेष र स्मारक मिति हो जहाँ दम्पती र प्रेमीका बीच मायालु मिलन मनाईन्छ, केहि स्थानहरूमा यो दिन मित्रहरू बीच स्नेह देखाउने दिन हो। चोकलेटहरूको परम्परागत बक्सहरू जस्तै हृदय प्रतीकको साथ कार्ड र उपहार विनिमय गर्न यो सामान्य छ। जापान, अमेरिका, पोर्चुगल, अंगोला, र अन्य धेरै देशहरूमा यो फेब्रुअरी १ ​​on मा मनाइन्छ। ब्राजिलमा, यो मिति १२ जुन १२ लाई "सान्तो कासामेन्तेरो" को ख्यातीका लागि चिनिने सान्तो एन्टोनियो डे लिस्बोवा दिवसको पूर्व संध्याको दिन मनाइन्छ।
फेब्रुअरी १ ​​On मा, जब हामी चकलेटहरू, विशेष भोजन वा हाम्रा प्रियजनहरूसँग कार्ड साझा गर्छौं, हामी यसलाई सेन्ट भ्यालेन्टाइनको तर्फबाट गर्दछौं।
तर यो रोमान्स को संत थियो?
भ्यालेन्टाइन डे एक प्रसिद्ध संत भ्यालेन्टाइन पछि नामाकरण गरिएको छ, एक पौराणिक कथा भन्छ कि भ्यालेन्टाइन एक पुजारी थिए जसले रोममा तेस्रो शताब्दीमा सेवा गरेका थिए। जब सम्राट क्लौडियस द्वितीयले विवाह गर्न निषेध गरे किनभने उनी विवाहित मान्छेहरू खराब सिपाही थिए भन्ने सोच्छन्। भ्यालेन्टाइनलाई लाग्यो कि यो अनुचित हो, त्यसैले उसले नियम तोड्यो र गोप्य रूपमा विवाहको व्यवस्था गर्‍यो। जब क्लाउडियसलाई थाहा भयो, भ्यालेन्टाइन पक्राऊ पर्यो र मृत्युदण्ड सुनायो।
त्यहाँ उनी जेलरकी छोरीलाई माया गर्थे र फेब्रुअरी १ ​​on मा मारिन लगिंदा उनले आफ्नो प्रेमीबाट "तिम्रो भ्यालेन्टाइन" मा हस्ताक्षर गरे। आज पनि प्रयोगमा रहेको अभिव्यक्ति। यद्यपि भ्यालेन्टाइनको दन्त्यकथाको पछाडिको सत्य अस्पष्ट हो, सबै कथाहरूले तिनीहरूको भावनालाई सहानुभूतिपूर्ण, वीर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, रोमान्टिक व्यक्तित्वको रूपमा जोड दिन्छ।
4.8 /5(5वोट )